Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Iihotele zaseHawaii zilungiselela ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi kwilahleko
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Njengokuba iihotele zaseHawaii zijongana nelahleko enkulu, abameli baseMelika Ityala kunye noKahele co-abaxhasi mali Ukubonelela ngoncedo ekujoliswe kulo kubasebenzi basehotele abagulayo.
Ingeniso yokuhamba kweshishini laseHawaii kuqikelelwa ukuba yehle ngeepesenti ezingama-77 ngo-2021 xa kuthelekiswa namanqanaba ka-2019.
Ukuhamba kweshishini, kubandakanya iqumrhu, iqela, urhulumente, kunye nezinye iindidi zorhwebo, ngowona mthombo mkhulu wengeniso yehotele.
Iihotele kulindeleke ukuba ziphele ngo-2021 ezantsi phantse ngama-500,000 emisebenzi xa kuthelekiswa ne-2019, kubandakanya ngaphezulu kwe-12,500 yemisebenzi elahlekileyo eHawaii.
Iihotele zaseHawaii kuqikelelwa ukuba balahle i-1.18 yezigidigidi zeerandi kwingeniso yokuhamba kweshishini ngo-2021, ezantsi 77.4% xa kuthelekiswa namanqanaba e-2019, ngokwengxelo yakutshanje evela kwi- Umbutho weAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA).
Iihotele kwilizwe liphela ziqikelelwa ukuba ziphele ngo-2021 ezantsi ngaphezulu kwe- $ 59 yezigidigidi kwingeniso yokuhamba kweshishini xa kuthelekiswa ne-2019 emva kokuphulukana ne- $ 49 yezigidigidi ngo-2020.
Uhlalutyo olutsha luza kwizithende zophando lwe-AHLA lwamva nje, olufumanise ukuba uninzi lwabahambi kwezorhwebo bayarhoxisa, banciphise, kwaye bahlehlisa uhambo phakathi kokuqhubeka kweenkxalabo ze-COVID-19.
Ukwandisa umgca wokuphila kubasebenzi basehotele kunye nokubonelela ngoncedo olufunekayo ukuze baphile de kubuye uhambo ukuya kwinqanaba laphambi kobhubhane, Abameli baseMelika Ed Case (HI-01) kunye noKaiali'i Kahele (HI-02) batyikitye njengabaxhasi bobambiswano i-Save Hotel Jobs Act, umthetho okwangoku phambi kweCongress oya kuthi uqondise i-100% yenkxaso-mali yawo ukugcina abasebenzi basehotele bekwimivuzo.
Ukhenketho lweshishini, olubandakanya ukudibana, iqela, urhulumente, kunye nezinye iindidi zorhwebo, ngowona mthombo mkhulu wengeniso yehotele kwaye akulindelwanga ukuba ufikelele kwinqanaba laphambi kobhubhane kude kube ngo-2024. kwaye igxininisa isidingo senkxaso yomdibaniso ekujoliswe kuyo, njengoMthetho we-Save Hotel Jobs.
Iihotele kulindeleke ukuba ziphele ngo-2021 ezantsi phantse ngama-500,000 emisebenzi xa kuthelekiswa ne-2019, kubandakanya ngaphezulu kwe-12,500 yemisebenzi elahlekileyo Hawaii. Kubantu bonke abalishumi abaqeshwe ngokuthe ngqo kwipropathi yehotele, iihotele zixhasa imisebenzi eyongezelelweyo engama-10 eluntwini, ukusuka kwiindawo zokutyela nakwiivenkile kwiinkampani ezibonelela ngeehotele- oko kuthetha ukuba imisebenzi eyongezelelweyo exhaswa phantse ziisigidi esi-26 ikwimingcipheko kwilizwe lonke ngaphandle kokuba iCongress ithathe amanyathelo.